Painted Al Ikhoyili
Tianjin liwei yensimbi & steel co., Ltd yasungulwa ngo 2002, futhi ebhaliswe Tianjin Airport Imboni Park. Ibhizinisi enkulu ye Liwei ungaphakathi emkhakheni yokukhiqiza, ukucutshungulwa futhi ukusabalalisa imikhiqizo steel. Imikhiqizo zihlukaniswe izingxenye ezintathu: amapuleti steel, ngamapayipi ensimbi futhi steel rebar. Steel amapuleti zihlanganisa ezibandayo iphuma steel usebenzisa ikhoyili enjani (CRC), kushisa iphuma steel usebenzisa ikhoyili enjani (HRC), lashukumisa steel usebenzisa ikhoyili enjani (GI) kanye prepainted steel lashukumisa usebenzisa ikhoyili enjani (PPGI). Steel amapayipi zihlanganisa ERW amapayipi, omnyama ebusweni amapayipi, amapayipi lashukumisa, amapayipi nekhono, ingxubevange amapayipi nokunye.
Thina ukusabalalisa steel umkhiqizo kokubili emakethe ezifuywayo kwezilwandle. Ezimakethe zendawo, singamalungu inkampani ejenti amakhulu Izigayo steel kuhlanganise Baotou steel iqembu, Hebei steel iqembu, Tiantie steel iqembu. Futhi ukusabalalisa amathani angaphezu kuka-50,000 CRC, GI futhi PPGI njalo ngonyaka. Ikhasimende lethu wendawo bakhona bagcwele wonke izifundazwe e INyakatho yeChina, ngigcina okwesikhathi eside nokubambisana nathi.
Inkampani yethu attained ukwamukelwa kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle ngonyaka wezi-2008, futhi lo msebenzi elithekelisiwe ezikhulayo manje. Ikhathalogu umkhiqizo ukuthekelisa kuhlanganisa CRC, GI, PPGI, Tinplate futhi ngamapayipi ensimbi. Amaklayenti babo abavela eMpumalanga Yurophu, eNingizimu Melika, Mideast nase-Afrika wasungula ozinzile futhi lwesikhathi eside ubuhlobo ibhizinisi nathi. Siyathembisa amaklayenti ethu nqampuna umhlabeleli, ngemali ephansi futhi ukulethwa ngokushesha.
"Ukwethembeka, Ubuqotho Trust Bahlonishwe Ngalokho" ibhizinisi lethu nenqubomgomo. Sibheke phambili ukuze usinika imikhiqizo umhlabeleli nezinkonzo wonke amakhasimende ethu Tikhulu.
Umdlalo win win phakathi inkampani kanye nezisebenzi, inkampani kanye namakhasimende kuyinto ukugijima yethu target. Sithemba esingakwenza zokusabalalisa inhlalakahle wonke umphakathi emva impumelelo ibhizinisi.
2-2-1404, No. 2 Chuangxinliulu, Huayuan Hi-Tech-Industrial Park, Tianjin, 300384, China